Nke 5 kacha mkpa Nevados nke Peru | Akụkọ Njem
Nevados nke Peru
Mariela Carril | | America, Ebe njegharị, Ihe ị ga-ahụ
Haswa nwere oke ala magburu onwe ya ma ọ bụrụ na anyị echee banyere otu esi kpụọ ha, n'ime narị afọ gara aga, na mmegharị mberede na ọnwụ nke eriri na efere tectonic, ha dị ebube karịa.
La Cordillera de los Andes bụ otu n'ime ugwu kachasị adọrọ mmasị n'ụwa na nke kachasị na mgbe ahụ gafere profaịlụ nke ọtụtụ mba South America na edemede ya. Otu n'ime mba ndị a bụ Peru na ugwu nke ya na snow ebighi ebi aghọwo ebe njem nleta maka ugwu ugwu kachasị mma. Ka anyị mata ihe ugwu snowy nke Peru.
Ugwu Andes depụtara otu akụkụ nke Colombia, akụkụ nke Venezuela, Ecuador, Bolivia, Peru, Chile na Argentina. Ogologo ugwu ya dị puku mita anọ mana Aconcagua, nke kachasị elu, na ala Argentina, ruru mita 6960 nke elu ya mere, ọ na-eso ya na Himalaya.
Anyị nwere ike ịsị na Andes bụ elu ụlọ nke America anyị agaghịkwa emehie ihe. Ke adianade do, ọ na-azọpụta ugwu mgbawa na kasị elu elu na andwa na gaa ngụkọta nke kilomita 7240. Mgbe ọ kwụsịrị njem dị ogologo nke dị nso na Oke Osimiri Pasifik, ọ na-emikpu n'ime mmiri nke South Atlantic, na elu nke Isla de los Estados, na, n'akụkụ nke ọzọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Oké Osimiri Caribbean.
Ndị ọkà mmụta ihe banyere ala na-ekwu na ugwu America a nke emebere site na ibughari efere Nazca n'okpuru efere South America, na ngwụcha nke Late Cretaceous ma ọ bụ Upper Cretaceous, oge ikpeazụ nke oge Cretaceous nke gwụrụ afọ 66 gara aga. Ọ bụ usoro mmeghari nke mere nsonaazụ ya bụ na enwere mgbawa ugwu na ogologo ya.
Ugwu a na-akpọ snow snow nke Peru dị na Central Andes, ngalaba nke gunyere Andes nke Bolivia, Argentina, Chile na Peru. Inca aha ya na okwu Apọs rute n’elu elu ya na snow na-adigide ma ọ bụ ha abụrụla ugwu ugwu, ije na njem njem.
1 Nevada Huascarán
2 Nevada de Alpamayo
3 Nevada Huaytapallana
4 Nevada de Huandoy
Nke a na massif na a snow okpu dị na ngalaba Ancash, Central Peru. Ọ dị ezigbo elu mgbe ahụ dị mita 6768 ma nwee ngụkọta nke nchịkọta atọ na obere dị iche na elu n'etiti ha. Nkume granite kpuchiri ụwa, ahịhịa na snow kpụrụ naanị ihe karịrị nde afọ ise gara aga.
Ọ bụ ugwu nke ise kachasị elu na America Ebe ọ bụ na ihe niile bụ ihe echiche, ọ bụrụ na a tụọ ịdị elu ya site n’etiti ụwa, ọ ga-abụ ugwu nke abụọ kachasị elu n’ụwa, ya bụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita abụọ karịa Ugwu Everest.
Ndagwurugwu abụọ miri emi kewapụrụ ya na ugwu, ndagwurugwu dịka a na-akpọ ha ebe a. Ke akpa ndagwurugwu emi odude Ogige ntụrụndụ mba huascaran, na ọdọ mmiri ya na njem ndị njem nleta. Ihe nke abuo adighi ama ama ma obughi ya mere o nweghi mma ma obu ihe omuma: Ọ nwere ọwara ụgbọ ala kachasị elu n'ụwa: 4732 mita.
Mgbe otu n'ime elu ọnụ rigoro n’elu n’afọ 1908, ọ bụkwa nwanyị America, Annie Peck mere ya, ọnụ ọnụ ugwu ndị ọzọ ga-enweta nleta nwoke ahụ naanị na 1932. Ogige ahụ bụ World Heritage Site kemgbe 1985, dị ka ebe nchekwa Biosphere n'ihi lagoons ya na glaciers, nke ruru ihe dịka iri atọ.
Nevada de Alpamayo
Nke a bụ ugwu ọzọ dị na otu ngalaba Peruvian nke Ancash. Jikwa mita 5947 nke elu na ọ bụ mace nke akpụrụ mmiri na nkume nke ọtụtụ ndị ọkachamara na-ejide aha la Ugwu kachasị mma n'ụwa.
O yiri pyramid nke zuru oke ma ọ bụ ezie na ọ bụghị oke osimiri ka ọ dị mma nke ukwuu na echefuru nkọwa ahụ n'oge na-adịghị anya. Obodo kacha nso ịmalite njem nke ịmara ugwu Peruvian dị 467 kilomita site na Lima na Caraz.
Nwoke Western, anyị agaghị ama ma ọ bụrụ na mmadụ gara ogologo oge gara aga, ruru ogo na 30s nke narị afọ nke iri abụọ. Taa ụzọ a na-agbago iji rute elu bụ nke otu ìgwè ndị Italy gbagoro afọ iri anọ gara aga, n'akụkụ ihu ndịda ọwụwa anyanwụ. Ọ dịghị mfe ma dịka ihe ha kwuru, ọ dị ka Himalaya.
Ugwu a nke snow na-emi odude ebe 2001 bụ mpaghara echedoro na ngalaba Junín Peruvian. O nwere ọtụtụ ọnụ ọgụgụ kasị elu na elu ya dị mita 5557 mgbe nke abụọ dị n'okpuru mita 5530. Mgbe e mesịrị, ka a na-agbakwunye ọtụtụ ọnụ ọnụ ugwu, ha nile karịrị puku mita ise. Lee ebube!
Anyị nwere ike ịkọwa ya dị ka obere ugwu nke dị naanị awa abụọ site na ụgbọ ala site na obodo Huancayo, na-ewe awa asatọ site na Lima. Ebe mgbago ịgbago ya dị puku mita anọ ma site n’ebe ahụ ndị ugwu nwere ike iso ụzọ abụọ.
Nevada de Huandoy
Ugwu a di na ngalaba Ancash na atụle 6395 mita nke elu. N'ebe ahụ, n'etiti igwe ojii na snow, ha zoro isi anọ snowno. Ọ dị n’ebe ugwu Huascarán snow na-acha na ndị ugwu na-abịa na ndagwurugwu ma ọ bụ iyi Llanganuco.
Ọ bụ n'ime ngalaba a maara dị ka Cordillera Blanca, Ugwu elu ugwu ndi snow kpuchiri elu nke na-aga n’akuku odida anyanwu nke Peru maka ihe dika kilomita 180 na n’ime ime ya, dika ihe di oke onu ahia, enwere ihe kariri nari isii, otutu otutu snow na otutu ndi kariri mita ise elu ugwu, ọtụtụ narị ọdọ mmiri na ọtụtụ osimiri.
Ọ bụkwa otu n'ime snow-capped ọnụ ọnụ nke Cordillera Blanca. Ọ nwere elu anọ, nke kachasị elu ya ruru 6369 mita elu na-esochi atọ ndị ọzọ. Ndị ugwu nke elu ugwu a na-agba ume na-ama na ha nwere ọrụ dị mgbagwoju anya na nke ahụ chọrọ ọtụtụ Usoro, nke mere na ọ bụ naanị na 50 ka e kwupụtara mmeri.
Ndị njem nleta na-abịa ugwu snow a na Peru site na obodo Huaraz, na mgbada ugwu ahụ, na a na-eme ọtụtụ njem mmụta na mgbakwunye na njem ugwu. Nwere ike ihe atụ ịme njem igwe kwụ otu ebe nke otu ụbọchị zuru ezu nke na-akpọrọ gị ịmara Rajucolta Creek na ọdọ mmiri ya na elu nke puku mita anọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbanye n'ogige ntụrụndụ mba ị ga-akwụ ụgwọ.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ihe ndị a bụ ụfọdụ ugwu a na-akpọ ugwu ugwu snow nke Peru. Enwere ọtụtụ ugwu snow na-adịru ebighi ebi na Peru, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọmarịcha ihe ịtụnanya dị na ngalaba Ancash.
Ọ bụrụ na egwuregwu egwuregwu ugwu na-amasị gị ma ịchọrọ ọhụụ nke ụwa nke naanị enwere ike iru na elu nke otu, mgbe ahụ Peru na-echere gị.
Huayna Picchu, akụ na Peru
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Nevados nke Peru
Ọma gịnị ka m nwere ike ikwu, na anyị peru e nwere mara mma eke Okirikiri enwe ike ịmata….
Ọ bụ mara mma nke ukwuu nke na m jisiri ike mee ezumike m rụọ n'ụlọ ... Diego leandro el Cuero
Zaghachi diego leandro
nnukwu ihe ebube mba anyị nwere dị oke mma na mpaghara niile nke snow jupụtara na peru
Ọ mara mma nke ukwuu na ekele nke mere ka m nwee ike inye onwe m ezigbo ọkwa na ụlọ akwụkwọ m
Achọrọ m ịgwa gị na ekele ha niile nwere ike ịchọpụta ma mee ihe omume ụlọ akwụkwọ anyị nke ọma yana ọ dịkwa oke mkpa ịmara gbasara ugwu dị mkpa snow na-ekpuchi na Peru, daalụ nke ukwuu !!!!
Zaghachi ka angie shteffany ruiz mejia
Ọfọn, Peru nwere ugwu mara mma nke snow kpuchiri elu, ọ bụ ezie na esighị m ebe ahụ, ha dị ka ọ mara mma.
Ezigbo ihu igwe, m ga-achọ ịma ma ị nwere ugwu slopi na ebe ma ọ bụ opekata mpe ma ọ bụrụ na ha ga-adị nwa oge
A na-enwekarị oke ugwu nke snow na-ekpuchi site na mpaghara ndụ, ọ bụghị na-eguzo n'elu ikpo okwu nke snow ma ọ bụ ice, nke a bụ otú ndị Peru na ụwa dum si enwe ekele. A hụrụ na ha amaghị lagoon willcacocha na Ancash ma ọ bụ Switzerland nke Cusco na Nevado Wacaywillque na ọdọ mmiri Piuray na Huaypo. Nke ahụ bụ ụzọ iji nwee ekele, lekọta ma chekwaa ugwu anyị na-enwe snow.
Ejegharị ejegharị na-aga Europe na ịhụnanya na inepo Day
Getaways maka inepo .bọchị